Mucaaradka Farmaajo oo qorsho halis ka wada Muqdisho Iyo Xildhibaano lagu kulminayo……. | Mucaaradka Farmaajo oo qorsho halis ka wada Muqdisho Iyo Xildhibaano lagu kulminayo……. | Hal Sheegaha La Hubo
Mucaaradka Farmaajo oo qorsho halis ka wada Muqdisho Iyo Xildhibaano lagu kulminayo…….
Warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in caasimadda dalka Soomaaliya ay ka socdaan kulamo hoose oo u dhexeeya dhinacyada Mucaaradka DF Soomaaliya.
Wararku waxa ay sheegayaan in dhinacyadan ay siyaabo kala duwan magaalada ugu kulminayaan Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaa oo la doonaayo in loo adeegsado dowlada la magac baxday Nabad iyo Nolol.
Mucaaradka ayaa Xildhibaanada ugu badan ku kala kulminaaya Hooyga ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho iyo Hoteelada kala ah Jazeera iyo Makka Al­Mukarama oo xiligaan Saldhig u ah mucaaradka.
Qorshahaani ayaa waxaa abaabulkiisa qeyb ka ah Xildhibaano garab ahaan taabacsan ‘’Damul­Jadiid’’ kuwaa oo ka dhex faa’iideysanaaya xiisada dowlada kala dhexeysa Mucaaradka.
Xildhibaanadan qaarkood ayaa mucaaradnimada ku baadi­goobaya kuraas ay ka helaan Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya
Sidoo kale, DF Soomaaliya ayaa u muuqaneysa mid ka caajistay dhaqan galinta talaabadii lagu mamnuucay shirarka aan lagu wargalin Wasaarada Amniga ee ku qabsooma Hoteelada iyo guryaha ay degan yihiin dhinacyada Mucaaradka.
Geesta kale, Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka meermeereysa xalinta khilaaf hoosaadka kala dhexeeya dhinacyada Mucaaradka ee aadka uga soo horjeeda dowlada, waxa ayna talaabadani khataro cusub u maleegaya DF Soomaaliya